Maxaa xubnaha NISA looga saari waayay gudiyadda doorashadda? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudiga Heer Wasiir ee Rooble u magacaabey dhawaan inuu tarxaan-bixiyo gudiyadda doorashooyinka, ayaa la kulmay caqabad wayn oo ku aadan ka-saarista xubnaha NISA.
Xog hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegay in liiskii Mucaaradka u gudbiyay Rooble oo gaaraya 67 xubnood in la geeyay xafiiska Fahad Yaasiin kahor inta uusan gudiga guda-galin shaqadiisa.
Taliyaha NISA ayaa diiday xubnaha qaar in laga saaro gudiyadda doorashooyinka heer Federaal iyo Heer Maamul Goboleed iyo kan xalinta khilaafaadka, isagoo ogolaadeey kaliya in 34 xubin la bedelo, kuwaasoo loo diray Maamul Goboleedyada.
Xubnaha uu diiday Fahad Yaasiin waa kuwa isaga uu soo qoray oo dhamaantooda ah Saraakiil dharcad ah oo katirsan hay'adda NISA, wuxuuna ugu tala-galay inay doorashadda codadka ugu shubaan Farmaajo, oo Musharax ah.
Waxuu mucaaradka sheegay in turxaanbixinta ay qabyo tahay, islamarkaana aan loo marin nidaam hufan oo xalaal ah, kadib markii laga soo tagay xubnihii ugu muhiimsanaa ee NISA katirsan, kuwaasoo Rooble loo gudbiyay liiska magacyadooda.
Xafiiska Rooble markii horeba ma ahayn mid u madax-banaan go'aannada, waxaa saameyn ku leh wali Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo Villa Somalia ku sugan, iyadoo arintaan ay keenayso in aysan doorashadda ku dhicin waqtigeeda, maadaama aan la fulin qodobadii lagu heshiiyay, oo qaarkooda caqabad lagala kulmay.
Xubnaha NISA, Shaqaalaha dowladda iyo taageeriyaasha Farmaajo ee baraha bulshadda ayaa aad uga buuxa gudiyadda doorashadda, waxaana kamid ahaanshahooda sabab u noqday inay doorashadda dib u dhacdo, oo Farmaajo mudo-korarsi sameysto, islamarkaana Xamar uu dagaal ka qarxo April 2021.